အပိုဝင်ငွေ ဘယ်လိုရှာကြမလဲ? - JobExpress Myanmar
အခုလို Covid-19 ကာလမှာ Stay Home နေကြတဲ့အခါ ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေပိုများလာတာနဲ့အမျှ အချိန်တွေကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချတတ်စေရန်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။
တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပုံမှန်ရနေတဲ့ ဝင်ငွေတစ်ခုအပြင် အပိုဝင်ငွေတွေရှာလာကြပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေ၊ အလွတ်တန်းအလုပ်တွေကနေ အပိုဝင်ငွေရှာချင်တဲ့သူတွေများသလို ကျောင်းတက်နေဆဲ ကျောင်းသားတွေပါ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဖြစ်ချင်တာတွေကို မေ့ထားပြီး ဖြစ်သင့်တာ ကို လုပ်ဆောင်နေတဲ့ကာလတစ်ခု မှာ အိမ်မက်တွေကို အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ အပိုဝင်ငွေတစ်ခုရှာဖွေသင့်ပါတယ် ။ ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာလည်း အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေက ခေတ်စားလာကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အချိန်တွေကို စီမံခန့်ခွဲဖို့နဲ့ တိုးတက်ကြီးပွားလိုစိတ်ရှိမှသာ ဒီလိုအလုပ်ကို ကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်မယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေးတွေမှာ
အကျိုးရှိရှိအသုံးချပြီး အပိုဝင်ငွေရမဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။
( ၁ ) Blogger
ကျွန်တော်တို့ အရင်ဆုံးဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အရင်ဆုံးဆန်းစစ်ပါ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် ဘာသာပြန်လုပ်ရတာတွေ စာရေးရတာတွေ ဓာတ်ပုံရိုက်တာတွေ ခေတ်စားလာပါတယ်။ သေချာတာတော့ ကျွန်တော်တို့ တကယ်ဝါသနာပါတဲ့အရာတစ်ခုမစခင်မှာ တစ်ခြားသူတွေရောဘာတွေလုပ်နေလဲ? ဘာတွေလုပ်ထားလဲဆိုတာ ကိုလေ့လာသင့်ပါတယ်။အခုခေတ်မှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ လူတိုင်းက ကိုယ်ပိုင် Blog တစ်ခုဆီရှိကြပါတယ်။
သူတို့ဆီက ပညာတွေကိုလေ့လာပြီး ကျွန်တော်တို့ဝါသနာပါတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Blog တစ်ခုတည်ဆောက်ပါ။Blog တွေတစ်ဆင့် လူသိများလာပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အပိုဝင်ငွေတွေရလာနိုင်ပါတယ်။
( ၂ ) Freelance Writer
အလုပ်အားတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အရာလေးတွေလုပ်ပြီး အပိုဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ စာရေးရတာ ဝါသနာ ပါတဲ့သူဆိုပါက Social Media ပေါ်က အကြောင်းအရာလေးတွေအခြေခံပြီး Freelance Content Writer တစ်ယောက်အနေနဲ့ အပိုဝင်ငွေရှာဖွေလို့ရပါတယ်။ လူစိတ်ဝင်စားစေမဲ့ ဆောင်းပါး‌ရေးတာမျိူးတွေက လူတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။စာများများဖတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။နောက်ပြီး ဘာသာပြန်‌ရေးခြင်းကလည်း အခုလို Internet ကိုတွင်တွယ်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုလာတဲ့အခါ အလုပ်ရှာရတာလွယ်တဲ့ အချိန်ပိုင်းအလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီအလုပ်တွေကို အိမ်ကနေ ထိုင်ပြိး Online ပေါ်မှာကနေတစ်ဆင့် အပိုဝင်ငွေ ရှာနိုင်တဲ့ အလုပ်တွေဖြစ်တယ်။
( ၃ ) နည်းပညာအချိန်ပိုင်းအလုပ်
IT ခေတ်ကြီးမှာ ကွန်ပျူတာ၊ Mobile နဲ့ပတ်သက်ပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုများလာကြပါတယ်။ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခြေခံလိုအပ်ချက်လေးတွေကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်အသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုရင် Company တွေဆီမှာ အချိန်ပိုင်းအလုပ် လုပ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီး Developer သမားတွေအနေနဲ့လည်း Out Source Project တွေရေးပေးပြီး အချိန်ပိုင်းအပိုဝင်ငွေရှာနိုင်ပါတယ်။Designer သမားတွေဆိုရင်လည်း Company Logoတွေ၊ လက်ကမ်းစာစောင် Design စတာတွေကို ဆွဲပေးရင်းနဲ့ Part Time Job အနေနဲ့လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ အဓိက ကိုယ်ရဲ့ အလုပ်ချိန်ကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲ တက်ဖို့ လိုပါတယ်။
( ၄ ) ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ခြင်း
သာမန်အခြေခံဝန်ထမ်းတွေအတွက် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခု လုပ်ဖို့ဆိုတာ အိမ်မက်တစ်ခုလိုပါပဲ။ အခုလိုSocial Media ခေတ်ကြီးမှာ သင်ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ပိုင်စီးဟွားရေးတစ်ခုလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ အရင်ကထပ်ပိုအခွင့်အလမ်းတွေများလာပါပြီ။ အရင်းအနှီး နည်းနည်းနဲ့ ကိုယ့်အတွက်လည်းအဆင်ပြေမယ့် လုပ်ငန်းလေးတွေ Online ပေါ် မှာ အလွယ်တကူ အကောင်အထည်ဖော်လို့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင် လူတော်တော်များများက covid -19 ကြောင့် stay home နေရတဲ့ အခါ online shopping တွေကိုအားကိုးလာကြပါတယ်။လူတွေက ကိုယ်အိမ်ကနေ အလွယ်တကူဝယ်ယူလာနိုင်တဲ့အခါ အပိုဝင်ငွေရှာတဲ့ စီးပွားရေးတစ်ခုလိုဖြစ်လာပါတယ်။နောက်ပြီး online shop တွေလုပ်လာကြတဲ့နဲ့အမျှ ပစ္စည်းပို့ပေးတဲ့ အလုပ်တွေလည်း ရှိလာပါတယ်။ ကိုယ်ကိုတိုင်က အပြင်သွားပြီး လူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရတာနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် လူပင်ပန်းပေမဲ့ အပိုဝင်ငွေရှာနိုင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
( ၅ ) အစားအသောက်လေးတွေရောင်းခြင်း
ကိုယ်တိုင်က ဟင်းချက်ကောင်းသူဖြစ်ပြီး တစ်ခြားလူတွေကိုလည်းအစားကောင်းကောင်းလေးတွေကျွေးချင်တဲ့ စေတနာပါရှိတယ်ဆိုရင် အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆိုင်လေးတွေဖွင့်သင့်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် အပိုဝင်ငွေရတဲ့အပြင် ကိုယ်ဝါသနာပါတာလေးနဲ့ တွဲလုပ်ရတဲ့အခါ စိတ်ကိုပိုတက်ကြွစေပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာ Online ပေါ်မှာ အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စီးပွားရှာရတာ လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားတာကြောင့် အပိုဝင်ငွေရှာတဲ့အခါ ထည့်စဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။
ဝင်ငွေရှာတဲ့ အခါကျွန်တော်တို့ အချိန်တွေ အားထုတ်မှုတွေလိုအပ်ပါတယ်။ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီမှူရှိနိုင်တဲ့ အလုပ်ကိုသာရွေးချယ်ပြီး လုပ်ကိုင်ပါ။အပိုဝင်ငွေ ရရင် ပြီးရောဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်က မပျော်တဲ့ အရာကို လုပ်မယ်ဆိုရင် ကြာရင်စိတ်ဖိစီးလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ရဲ့ လက်ရှိအလုပ်ကို မထိခိုက်ဘဲ အပိုဝင်‌ငွေတွေရှာဖို့ အကြံပြုရေးသားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။
Coach vs Mentor ဘာကွာလဲ ?